Warehouse Yekuchengetera Heavy Duty Simbi Pallet Racking Sisitimu
Warehouse Kuchengetera Heavy Duty Simbi Pallet Racking Sisitimu
Kuwana kwega kwega kune mapallet ese kusvika pakukwirira kuzere kwedura
Nyore Stock kutenderera kunowanikwa
Kugadziriswa kwedanda kuri nyore kunogarisa zvinokachidzika pallet dzakakwirira.
Inoenderana nemazhinji ekubata michina michina
Yakajairwa shiviriro yepasi painoshandiswa kusvika 10m kukwirira
Yepazasi chikamu pallets inogona kuwanikwa pasi.
95% Yakakwira avhareji nzvimbo mashandisiro.
1.Product sumo yekusarudza pallet rack
HEGERLS Selective Pallet Racking ndiyo yakanakisa mhinduro kumatura uko kuri kudiwa kuti uchengete akasiyana ezvinyorwa mumapallets. Inopa mukana wakananga kune ese mapallet e100% yekuwanika uye yakanaka stock kutenderera. Mapallet anogona kuwanikwa, kuwanikwa uye kutamiswa zvakasiyana kupa nekukurumidza kubata kwezvinhu zvine palletized. Inopa nyore danda kugadzirisa uye inogarisa akasiyana pallet pakakwirira.
3.1 Bhokisi danda dudziro
3.2 Yakarurama kutaurwa
4.Production ruzivo rwekusarudza rack
4.1High density density yekuchengetedza system yekuchengetedza mapallet, mashandiro ekuchengetera mashandisiro;
4.2Kutanga-kwekupedzisira-kubuda nzira yekuwana;
4.3Top uye kumashure bracing zvinoshandiswa kugadzirisa iyo yose racking, ichiita iyo rese racking yakagadzikana uye yakachengeteka;
4.4First level pallets inogona kuiswa pasi pevhu
4.5 Kuchinja uye nyore kuisa, kugadzirisa nzvimbo yekushandisa.
Dhirivhari. Kutumira uye sevhisi
Mubvunzo: zvakadii nezvekuisirwa?
Kunyangwe zvodii rudzi rweiyo stacker crane inowanzo kuverengerwa yakatwasuka kufamba mashandiro, kusimudza mashandiro, kurodha chikuva uye forogo mashini, furemu nemagetsi michina uye zvimwe zvakakosha zvikamu. Iyo inofamba mota inotyaira mavhiri kuti afambe yakatwasuka pane yepasi njanji kuburikidza nemudhiraivho shaft, iyo inosimudza mota inotyaira nhumbi yetafura yekufamba yakatwasuka kuburikidza necheni / tambo tambo / bhandi, uye maforogo ari papuratifomu chikuva anoita telescopic kufamba. Anotsvaga kero anotsvaga anoshandiswa Kudzora iyo stacker yakatwasuka kufamba chinzvimbo, uye simudza kero yekuwana kuti utore chinosimudza chinzvimbo chekupakata chikuva; kuburikidza neyekutsvaga kero uye kuzivikanwa kwemafoto, uye kushandurwa kwenhamba dzekutaurirana, kutonga kwecomputer kunogona kuitika, uye otomatiki, semi-otomatiki uye manyorerwo ekudzora anogona zvakare kuzadzikiswa kuburikidza neanodzora pani.
Pashure: HEGERLS masherufu emapallet racking
Zvadaro: HEGERLS imba yekuchengetera mezzanine racking
Tsika Pallet Racking
Yakadzika Racking System
Double Yakadzika Racking
Kwakakurudzira nhovo Rack
Hannibal Pallet Rack
Inosarudza Pallet Rack